Da'yarka Real Madrid Ee Vinicius Jr Oo Sheegay Tirada Koobabka Ay Kooxdiisu Doonayso Sanadkan & Rekoodh Ay Isha Ku Hayaan - Gool24.Net
Da’yarka Real Madrid Ee Vinicius Jr Oo Sheegay Tirada Koobabka Ay Kooxdiisu Doonayso Sanadkan & Rekoodh Ay Isha Ku Hayaan
Da’yarka garabka weerar ee kooxda Real Madrid ee Vinicius JR ayaa shaaca ka qaaday tirada koobabka uu doonayo inuu xilli ciyaareedkan kula guuleysto kooxdiisa xilli uu isagu shaqsiyan u muuqdo mid ka wanaagsan sidii hore.
Real Madrid ayaa hoggaanka u haysa horyaalka La Liga iyagoo 10 dhibcood kasoo helay afartoodii kulan ee ugu horreeyay xilli ciyaareedkan walow ay jiraan kooxo ciyaaray kulamo ka badan kuwooda.
Vinicius ayaa u muuqda mid galay xilli ciyaareedkii uu doorkiisa Real xorraysan lahaa isaga oo laba gool oo muhiim ah usoo dhaliyay labadii kulan ee ugu dambeeyay.
Kaddib kulamadii ugu dambeeyay iyo qaab ciyaareedkiisii goolasha lahaa, da’yarka ree Brazil ayaa hadda si cadaan ah u sheegay inuu doonayo inuu Los Blancos kula guuleysto xilli ciyaareedkan dhammaan saddexda koob ee ay ku jirto.
Real ayaan kamid ahayn kooxaha tirsan ee saddexleyda koobabka ah hal xilli ciyaareed kusoo wada guuleystay walow ay sidaas laba jeer samysay kooxda ay Spain ku xifaaltamaan ee Real Madrid.
Vinicius ayaa isaga oo ka hadlaya hammigiisa Madrid ee xilli ciyaareedkan yidhi “Hammigayga ugu weyni waa inaan ku guuleysto saddexleyda koobabka ah, sidaas hore umaanaan samayn, quluubtayada iyo maskaxdayada ayaanu galinay”
Goolkii ugu dambeeyay ee Vinicius ayaa ahaa mid yimid kulankii ugu dambeeyay ee ay kooxda Levante booqdeen balse ciyaaryahanka ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsani ahaa inay saddexda dhibcood soo qaateen.